We.com.mm - ဆလီနာဂိုးမက်ဇ်ကို Crush နေတဲ့ အနုပညာရှင်များ
ဆလီနာဂိုးမက်ဇ်ကို မိန်းကလေး တော်တော်များများက သဘောကျကြတယ်ဆိုတော့ ယောက်ျားလေးတွေ Crush တာလည်း ဆန်းတော့ မဆန်းပါဘူး။ မဆန်းတာကို ဘာလို့ရေးကြီးခွင်ကျယ်လုပ်ပြောလည်းဆိုတော့ အနုပညာရှင်အချင်းချင်း Crush တာမလို့ပါ။ အနုပညာ ရှင်တွေဆိုတော့ အနေအထိုင် အပြောအဆိုက အစ ထိန်းသိမ်းကြတာပဲလေ။ ကိုယ် Crush နေတဲ့သူကို အင်တာဗျူးတွေမှာ ထုတ်ပြောဖို့ဆိုတာ တော်ရုံသဘောကျတာလား။ မင်မင်တို့ရဲ့ဆလီနာလေး ဘယ်လောက်တောင် စွံခဲ့လဲ၊ စွံနေတုန်းလဲဆိုတာလေးကို သက်သက်ကြွားချင်လို့ပါ။ ဆလီနာကို Crush ပါတယ်လို့ အတိအလင်း ဖွင့်ပြောထားတဲ့ အနုပညာရှင်တွေကတော့…
မပြောချင်ပေမယ့်လည်း ပြောရဦးမယ်။ ဆလီနာကို Crush တဲ့ထဲမှာမှ အသက်ငယ်သလောက် ဇပြင်းတဲ့ ဂျက်စတင်က ထိပ်ဆုံးကပါခဲ့တာပေါ့နော်။ TMZ ရဲ့အင်တာဗျူးတစ်ခုမှာ ဂျက်စတင်ကိုယ်တိုင်ဖြေခဲ့တာပါ။
2. Dyllan O’Brien
Maze Runner နဲ့ Teen Wolf Series ရဲ့မင်းသားလေး ဒီလင်ကလည်း ၂၀၁၁ ခုနှစ် ရုပ်ရှင်ဆုပေးပွဲတစ်ခုရဲ့ အင်တာဗျူးမှာ ဆလီနာရဲ့ကောင်းကြောင်းတွေပြောနေရင်း ဆလီနာဝင်လာတာမြင်တော့ စိတ်လှုပ်ရှားသွားတာကြောင့် သူဆလီနာကို ကျိန်ကြွေနေကြောင်း အတည်ပြုနိုင်ခဲ့တာပါ။ နောက်ထပ် အင်တာဗျူးတစ်ခုမှာလည်း သူ ဆလီနာကို သဘောကျတယ်ဆိုတာ ဝန်ခံခဲ့ပါတယ်။
3.5Second of Summer
Pop Rock Boy Band ဖြစ်တဲ့5Second of Summer ရဲ့အဖွဲ့ဝင် Calum Hood ကတော့ အင်တာဗျူးတော်တော်များများမှာ ဆလီနာကို သဘောကျကြောင်း မကြာခဏ ထုတ်ပြောလေ့ရှိသူပါ။
ဂျော့ချ်ဟာ အင်္ဂလိပ် အဆိုတော်၊ သရုပ်ဆောင် ဖြစ်ပြီး Union J ဆိုတဲ့ Boy Band ရဲ့ အဖွဲ့ဝင်ဟောင်းလည်း ဖြစ်ပါတယ်။ ဂျော့ချ် ကို အင်တာဗျူးတစ်ခုမှာ “ဘယ်အနုပညာရှင်ကို သဘောအကျဆုံးလဲ” မေးတော့ ဆလီနာ ဂိုးမက်ဇ်လို့ဖြေခဲ့ပါတယ်။
5. Nathan Sykes
Wanted အဖွဲ့ဝင် နေသန် ကတော့ ဆလီနာကို တော်တော်လေး သဘောကျတယ်လို့ ဝန်ခံထားပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ဂျက်စတီဘီဘာကြောင့် ဖွင့်မပြောခဲ့တာပါတဲ့။
One Direction အဖွဲ့ဝင် Naill Horan ကလည်း Radio interview တစ်ခုမှာ ဆလီနာကို Crush ကြောင်း ဝန်ခံထားပါတယ်။ ပထမဆုံး အနုပညာရှင်Crush ကဘယ်သူလဲလို့ မေးတော့ ဆလီနာလို့ဖြေခဲ့ပါတယ်။
One Direction အဖွဲ့ထဲကပဲဖြစ်တဲ့ လိုင်ယမ်ကလည်း စပိန်အဆိုတော်မလေးတွေထဲမှာ ဘယ်သူ့ကို ကြိုက်လဲ လို့မေးတော့ “ဆလီနာပါ။ သူမကလန်းတယ်” လို့ဖြေခဲ့ပါတယ်။
စပန်ဆာဟာ အသက် ၂၆ နှစ်သာရှိသေးတဲ့ အမေရိကန် သရုပ်ဆောင်တစ်ယောက်ပါ။ အင်တာဗျူးတစ်ခုမှာ “ကျွန်တော် ဆလီနာကို သဘောကျတယ်။ သူမက ချစ်စရာကောင်းတယ်လို့ထင်တယ်။ ပြီးတော့ သူမက ချစ်ဖို့ကောင်းတဲ့ တက်ဆက်မြို့သူလေး ဖြစ်လို့ပါ။ ကျွန်တော်နဲ့အဲဒီအချက်တူတယ်လေ။ ဒါကြောင့် သူမကို သဘောကျတယ်” လို့ဖြေထားပါတယ်။
BTS အဖွဲ့ဝင် RM ကလည်း အင်တာဗျူးတိုင်းလိုလိုမှာ ဆလီနာဂိုးမက်ဇ်ကို သဘောကျကြောင်း၊ ဆလီနာဂိုးမက်ဇ်နဲ့ တွေ့ချင်ကြောင်း ပြောလေ့ရှိပါတယ်။
စပိန်အဆိုတော် မာလူးမားကလည်း “ကန်ဒယ်ဂျန်နာနဲ့ ဆလီနာဂိုးမက်ဇ် ဘယ်သူ့ကို ရွေးမလဲ” မေးတော့ ဆလီနာ လို့ဖြေခဲ့ပါတယ်။
11. Joel Pimentel (CNCO)
လက်တင် အမေရိကန် Boy Band တစ်ခုဖြစ်တဲ့ CNCO ရဲ့အဖွဲ့ဝင် ဂျိုဝယ်ကလည်း သူ့မှာ “Crush နှစ်ယောက်ရှိပါတယ်။ ပထမတစ်ယောက်က ဆလီနာဖြစ်ပါတယ်။ သူမရဲ့Baby Face လေးကို ချစ်လို့ပါ” တဲ့။
မကြာသေးခင်ကမှ အချစ်ဇာတ်မြူးကားလေးတွေနဲ့ ပျိုတိုင်းကြိုက်တဲ့ နှင်းဆီခိုင်လေး နိုအာကလည်း ဆလီနာက အလန်းဆုံး ကောင်မလေးလို့ဖြေခဲ့ပါတယ်။ အင်တာဗျူးတစ်ခုမှာလည်း “ဆလီနာနဲ့ချိန်းတွေ့ချင်လား” လို့မေးတော့ “အသေအချာပဲပေါ့” လို့ဖြေခဲ့ပါတယ်။
ဒါတောင် ဖွင့်ပြောတဲ့ အနုပညာရှင်တွေပဲ ရှိသေးတာနော်။ ဖွင့်မပြောတဲ့သူတွေ၊ ပရိသတ်ထဲက ကောင်လေး ဘယ်နယောက်လောက် သူမကို crush နေအုံးမလဲ မသိဘူး။ ခုတော့ သူမကို လွတ်လွတ်လပ်လပ် Crush လို့ရပြီလေ။ ဂျက်စတင်ဘီဘာရဲ့ကျေးဇူးကြောင့်ပေါ့။ Long Gone Jelena ပါနော်။
Ref; Selena Gomez Acapella
Fan တွေနဲ့ လက်ထပ်ခဲ့တဲ့ ဟောလီးဝုဒ်အနုပညာရှင်များ
Running Man မှာ အနုပညာရှင်များနဲ့အတူ ပါဝင်ကစားမယ့် Blackpink’s Jisoo, Jennie